Junction 8 Condo ​ငှါးမည်​
ပေ( 1350 sqft )ကျယ်၀န်းပြီး 1 Master Bed Room ,3Single Bed Room ပါရှိသော4AC ,Fully Furniture,...
Posted on Aug22018
ရောင်းပြီး / ငှားပြီး - ကွန်ဒို - အလုံ
Hilltop Vista Condo အခန်​းကျယ်​ အမြန်​​ငှါးမည...
မင်​းရဲ​ကျော်​စွာလမ်​း ၊ အလုံမြို ့နယ်တွင်တည်ရှိသော( 2000 Sqft )အကျယ်အ၀န်းရှိ5Floor ,2Master...
ပုလဲကွန်​ဒို အလွှာမြင်​့အခန်​း အမြန်​​ငှါးမည်...
ကမ်ဘာ​အေးဘုရာလမ်​းနှင်​့ဆရာစံလမ်​း​ထောင်​့ဗဟန်းမြို ့နယ်တွင်​ရှိသော( 1570 Sqft အကျယ်အ၀န်းရှိ)10 F...
ရောင်းပြီး / ငှားပြီး - လုံးချင်းအိမ် - သာကေတ
နှစ်ထပ်တိုက် လုံးချင်းအိမ် လိုချင်သူများအတွက် ာအထုးသင့်လေ ျာ်ပါတယ်။
Ko Shwe Htoo contac...
ရောင်းပြီး / ငှားပြီး - လုံးချင်းအိမ် - ဒဂုံ
လုံးချင်းအိမ်ငှါးမည် (ဒဂုံ) စားသောက်ဆိုင်၊ ရု...
စိတ််၀င်စားပါက ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။............54 real estate 09765545454, 09 79 82 33 825
ရောင်းပြီး / ငှားပြီး - လုံးချင်းအိမ် - ပန်းပဲတန်း
Posted on Mar 1 2020
25 x 40 ft2
Aye Nyein Su
ရောင်းပြီး / ငှားပြီး - လုံးချင်းအိမ် - ရန်ကင်း
အိမ်ကို ကြေွပြားနှင့် ပါကေးအပြည့်ခင်းထားပီး ။ အခန်းတိုင်းတွင်လည်း aircon တပ်ဆင်ထားရျွ် အေးအေးဆေးဆ...
ရောင်းပြီး / ငှားပြီး - တိုက်ခန်း - သင်္ဃန်းကျွန်း
ပြည်သာယာလမ်မး ,ရတနာလမ်းမ,တိိုနှင်နီးပြီး (အောင်ရတနာဆေးရုံ)နှင့်လည်နီးပါသည်။ဈေးနူန်းအညှိနှိုင်ရှပါသည်...
ရောင်းပြီး / ငှားပြီး - ကွန်ဒို - ကမာရွတ်
You can also look for the one you want in our page too. Please message me or contact me for more d...
1500 Sqft ft2
ရောင်းပြီး / ငှားပြီး - စက်မှုဇုန် - ပဲခူး
ပဲခူးစက်မှုဇုန် မြေအငှား (ID – 324)
Land for rent in Bago Industrial Zone Total land area – 30 Acres Land is Industrial land. Asking...